प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : कहिलेदेखि पाउँछन् बेरोजगारले रोजगारी ? | Ratopati
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : कहिलेदेखि पाउँछन् बेरोजगारले रोजगारी ?
रोजगारी नपाए निर्वाह भत्ताको ग्यारेन्टी
personमदन ढुङ्गाना exploreकाठमाडौं access_timeमाघ २९, २०७५ chat_bubble_outline0
सरकारले फागुन १ गतेबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागु गर्दैछ । राष्ट्रिय सभागृहमा बुधबार भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको घोषणा गर्दैछ ।
देशभित्रै रोजगारीको ग्यारेण्टी गर्नेदेखि बेरोजगार युवाहरुलाई भत्ता दिनेसमेतको व्यवस्था भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई लिएर यतिबेला धेरै चर्चा–परिचर्चा चलिरहेको छ ।
तर अहिले जसरी तामझामका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको घोषणा गरिँदैछ, के व्यवहारमा रोजगारीको व्यवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने चिन्ता र कौतुहलता पनि जन्माएको छ ।
आखिर के छ त प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ?
नेपालको संविधानको धारा ३३ ले प्रत्येक नागरिकको रोजगारीकोे हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै धारा ५१ मा सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दै देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने र स्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने, मर्यादित श्रमको अवधारणा अनुरूप सबै श्रमिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पूँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशकै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।
(ज) पुनर्निमाणः सार्वजनिक/निजी भवन निर्माण, पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निमाण आदि ।
(ट) सूचना तथा संचार प्रविधिः नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय तथा अन्य निकायहरु, प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, निर्देशनालय तथा कार्यालयहरु, स्थानीय तहहरु र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अभिलेख डिजिटाइजेशन गर्ने, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग र आईटी इनेवलिंग सर्भिसेज आदि ।
स्थानीय तहमा चैत १ गतेबाट मात्रै बेरोजगारहरुको सूची संकलन सुरु हुनेछ । त्यसपछि उनीहरुको वर्गाीकरण गरिनेछ । त्यसपछि रोजगारीको क्षेत्र खोज्दै गर्दा करिब–करिब यस आर्थिक वर्ष बित्नेछ । केही केही बेरोजगारले रोजगारी पाएपनि यस आर्थिक वर्षमा धेरै बेराजगारले रोजगारी पाउने सम्भावना कम छ भने निर्वाह भत्ता पनि कसैले पाउने छैनन् । यसको कार्यन्वयन सम्भवतः अर्को आर्थिक वर्षबाट हुने छ ।